Fampiharana hanampiana fari-drano amin'ireo sary amin'ny iPhone | Vaovao IPhone
Fampiharana hanampiana fari-drano amin'ireo sary amin'ny iPhone
Raha tianay ny maka sary, dia azo inoana fa rehefa hizara ny sary tianay indrindra dia hieritreritra indroa izahay, satria tsy fantatrao hoe aiza no hiafaran'izy ireo, indrindra raha tena tsara ny valiny. Amin'ireo tranga ireo dia mety misafidy ny hody isika amin'ny alàlan'ny fampiharana fanovana, toy ny Photoshop, Pixelmator na GIMP dia ampio ny fantsonay hizara azy ireo amin'ny fiadanan-tsaina tanteraka. Na azontsika atao ny mampiasa ny rindranasa izay azontsika ao amin'ny App Store ary mamela anay hanisy mari-drano tsy mila atao amin'ny alàlan'ny solosaintsika, mba hahafahantsika mizara izany avy hatrany.
Amin'ireo rindranasa rehetra misy ao amin'ny App Store, Telo ihany no nofidiko, ka tsy sarotra ny fizotran'ny fisafidianana. Izy rehetra dia manan-kery tokoa amin'ity asa ity, fa ny iray amin'izy ireo koa dia afaka mahazo bebe kokoa amin'izany isika fa tsy manampy fotsiny ireo mari-drano amin'ireo sary.
Ny workflow dia fampiharana ny alàlan'ny alàlan'ny otrikaretina mandeha ho azy izay tsy mamela antsika hanisy mari-drano amin'ny alàlan'ny ony Watermark tsotra y Watermark Ovelay. Noho ireo fizotran'asa ireo dia azontsika atao ny maka tahaka ny tsipika izay tianay hampidirina ho mari-drano eo amin'ny solaitrabe ary hampiasa azy io hanampiana azy amina sary marobe. Fa koa, Workflow dia manolotra automatique maro an'isa antsika Avy amin'izany no ahazoantsika tombony lehibe.
Misaotra an'i iWatermark afaka miaro ny sarintsika isika amin'ny alàlan'ny lahatsoratra, sary, sonia na kaody QR ka amin'ny fotoana rehetra dia fantatra fa tompontsika ara-dalàna izy io. Manolotra antsika amina endritsoratra 157 isan-karazany hamoronana ny fari-dranontsika ho fanampin'ny zavatra 34 izay ahafahana mamorona sary manokana na sary hanasoniavana ny sarinay rehetra. Izy io dia manana kinova maimaim-poana misy safidy voafetra, izay misy koa ny mari-drano azy manokana, fa ny mahita ny fomba fiasan'ny fampiharana dia mitombina tanteraka.
iWatermark Lite Watermark Picsmaimaim-poana
Ity rindranasa ity dia misy kinova voaloa sy kinova maimaimpoana maimaimpoana (izay misy mariky ny app), izay voafetra bebe kokoa ny safidin'ny watermark. eZy Watermark dia mamela antsika hanatanteraka ny fizotran'ny ampio mari-drano maherin'ny 100 hatramin'ny zato miaraka, mamela antsika ihany koa, toy ny fampiharana teo aloha, hanampy sonia, lahatsoratra, gothic, zon'ny fiara, kaody QR ... Raha vao nampianay ilay mari-drano dia afaka mizara izany amin'ny alàlan'ny Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, mailaka izahay …
eZy Photo Watermark Litemaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Fampiharana hanampiana fari-drano amin'ireo sary amin'ny iPhone
Ny tweak Eclipse 4 dia manome antsika ny maizina maody ao amin'ny iOS 10
Déjà vu?: Famokarana iPhone 8 hanomboka aloha kokoa noho ny mahazatra